Murni PP Abdii Kutate, Daa’imman Waraana Bu’aa Hin Qabneef Bobbaasee Yakka Hamaa Raawwachaa Jira – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooMurni PP Abdii Kutate, Daa’imman Waraana Bu’aa Hin Qabneef Bobbaasee Yakka Hamaa Raawwachaa Jira
Ibsa ABO, Adoolessa 23/2021
Lola, murni aangoorra jiru lammiilee isaa irratti labse ilaalchisee, ABOn yeroo garaagaraatti deddeebi’ee yaaddoo qabu ibsaa ture. Kanaanis lolli kun lola bu’uura heera mootummaa hin qabne ta’uu qofa osoo hin taane lola injifachuun hin danda’amne akka ta’e gadi jabeessinee dhaamaa turre. Kanaaf ABOn, waldhibdee (conflict) kana furuudhaaf, rakkoon siyaasaa biyyattii karaa nagaatiin akka furamuuf deddeebi’ee gaafachaa ture. Haatahu malee, Paartiin Bilxiginnaa mataa jabaachuudhaan, waggoota sadan darbaniif uummattoota Itoophiyaa fi paartilee mormitootaa irratti lola labsee lolaa jira. Paartiin Bilxiginnaa (PPn) akka waan lolli rakkoo biyyattii mudateef fala ta’eetti yaada.
Akkuma beekamu Mootummaan Dr. Abiyyi lola biyyattii keessatti gaggeeffamaa turan jechuunis loloota Oromiyaa, Beneeshaangulii fi Tigiraay keessatti gaggeeffamaa turan irratti injifatamee jira. Kun immoo Raayyaa Ittisa Biyyaa dadhabsiisee, humna mootummichi waraana bobbaasuuf qabu laamshessee jira. Kanatti dabalees, waraanni kun waraana lammiilee biyyattii irratti labsamee fi waraana hiika hin qabne waan ta’eef, uummattoonni Itoophiyaa baay’een isaanii lola kanatti hin amanne. Sababa kanarraan kan ka’e gareen aangoorra jiru dhiyeessi humna namaa waraanaaf barbaachisu argachuun danqaa guddaa itti ta’e. Waan kana ta’eef, namni jiraataan biyya kana keessaa ilaalcha qajeelaa qabu kamiyyuu, lolli kun lola lammiilee biyyattii irratti labsame waan ta’eef, fudhatama akka hin qabne ni amana. Lolli kun lola hiika hin qabne ta’uu isaa ibsuun kan mormaan uummata qofa osoo hin taane, miseensonni Raayyaa Ittisa Biyyaa FDRI fi Miliishonni adda waraanaa deeman mataan isaanii lola hiika hin qabne kana keessatti qooda fudhachuu isaaniitiif gaabbaa jiru.
Haatahu malee hafteen murni PP ammas faallaa fedhii uummataa deemuudhaan waraanaatti cichee jira. Murni aangoo itti rarra’ee hafee jiru, aangoorra irra turuudhaaf filannoo biraa waan dhabeef, daa’imman waa’ee lolichaa hoomaa hin beeknee fi bilchina hin qabne adda waraanaatti bobbaasuutti fuuleffatee jira. Odeeffannoo qabatamaan kutaalee biyyattii garaagaraa irraa nu qaqqabaa jiru akka agarsiisutti, gareen PP daa’immaan umuriin isaanii waggaa 15 gadii ta’an leenjii waraanaa akka fudhataniif dirqisiisuudhaan, waraanaaf qopheessaa jira. Daa’imman kunniin baay’een isaanii murna hawaasa keenyaa harka qaleeyyii ta’an keessaa kan filataman yoo ta’an, warra waan nyaatanii ittiin jiraatan argachuuf jecha hojii kophee qulqulleessuu, hojii guyyaa hojjetanii fi hojii humnaa barbaadaniidha. Murni aangoorra jirus hojiidhaaf miindeeffamtu jechuudhaan odeeffannoo sobaa kennee gowoomsuudhaan gara adda waraanaa akka deemaniif dhiibbaa irratti gochaa jira. Wayita ibsa kana baasaa jirru kanatti, Murni PP daandii fi mana namoota dhuunfaa dabalatee, Mana Hidhaa Amboo, Mana Hidhaa Daalattii (Sabbataa), Sulultaa fi Buraayyuu keessa daa’imman humnaan gara adda waraanaatti guuraa jiru. Akkasumas odeeffannoon maddeen amanamoo ta’an irraa nu qaqqabe akka eerutti, kutaalee biyyattii biroo keessatti haaluma wal fakkaatuun daa’imman dirqisiisuudhaan waraanaaf qaween dirqisiisanii bobbaasaa jiru.
Daa’imman giddugaleessa Oromiyaa keessaa filataman kunniin yeroo ammaa Kaampii Kolleejjii Sandaafaatti argamutti walitti qabamanii kan jiran yoo ta’an, achiirraas gara wiirtulee leenjii waraanaatti bobbaafamu. Daa’imman kunniin erga kaampii leenjii waraanaa seenanii booda, humnoota waraanaan waan eegamaniif, miliquudhaaf carraa hin qaban.
Daa’imman dirqisiisuudhaan waraanaaf bobbaasuun daba qofa osoo hin taane, faallaa seera biyyaalessaa fi seera idil-addunaa ta’uu isaa ABOn gadi jabeessee akeekkachiisa. Fakkeenyaaf Waliigalteen Mirgoota Daa’immanii (1989) fi Tumaan Mana Murtii Yakkaa Idil-addunyaa (2002) mootummaanis ta’e gareen mootummaa hin taane, haala kamiyyuu keessatti daa’imman umuriin isaanii waggaa 15 gadi ta’an hidhachiisuu fi waraanaaf bobbaasuu ni dhorka. Akkasumas sarbiinsa mirga lubbuun jiraachuu fi haalellawwan bifa biraadhaan isaan irra ga’u dabalatee, daa’imman hawaasa keessatti saaxilamoo waan ta’aniif, seerri biyyaas ta’e seerri idil-addunyaa daa’imman waraanaaf bobbaasuu ni dhorka.
Kanaaf gocha kana balaaleffachaa, uummanni Oromoo, uummattoonni Itoophiyaa biroo fi hawaasi idil-addunyaa gocha yakkaa kana dhaabsisuuf waan isaaniif danda’ame akka raawwatan dhaamna. Maatii, gareewwan hawaasaa biroo fi jaarmiyaaleen siyaasaa daa’immaan balaa kana irraa eeguudhaaf waan danda’an gochuurratti argamu. Haatahu malee daa’imman humnoota harcaatota PPn hidhachiiseen filatamaa waan jiraniif, garee daa’imman kanniin baraaruuf hojjechaa jiruuf haalichi ulfaataadha.
Waan kana ta’eef, uummanni Oromoo fi uummattoonni Itoophiyaa biroon gurmaa’anii, tokkummaa isaanii jabeessuudhaan, daa’imman kanniin gocha hammeenyaa fi cubbuu harcaatota PP kanarraa akka baraaran dhaamna. Addatti immoo caasaan paartilee siyaasaa, caasaan Qeerroo/Qarree, fi Bulchiinsi Mootummaa Ce’umsaa Naannoo Oromiyaa daa’imman kanniin eeguu fi baraaruuf cimee akka hojjetu yaadachiifna. Akkasumas dhimma kana qorachuudhaan, qaamolee daa’imman waraanaaf bobbasaan bu’uura seera idil-addunyaatiin akka himatanii fi seeratti dhiyeessan gaafanna.
Dhummarrattis, uummanni Oromoo fi Uummattoonni biyyattii biroon gocha hammeenyaa harcaatotni PP inumaayyuu biyyattii gara badiisaatti oofu dura tokkummaan akka dhaabatan dhaabna.
Manni Maree Uummataa Uummata Irratti Waraana Hin Labsu! Damee Boruutin, Gurraandhala 27, 2018 Biyya lafaa…